ညီလင်းသစ်: February 2009
အဲဒီအသံထွက်ရ ခပ်ခက်ခက်နဲ့ ခေါင်းစဉ်က အခုတလော ထမင်းပွဲမှာ သားကလေး ပြောပြောနေ တဲ့ expression ပါ၊ မြန်မာလို အနီးစပ်ဆုံး ရေးရရင်တော့ အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ၊ (တခါတခါ ဘလော့ဂ်မှာ အသံပါထည့်ရေးလို့ရရင်ကောင်းမယ်)၊ သားကလေးက စကားကောင်းကောင်းမပြော သေးပါဘူး၊ အသက် တစ်နှစ်ခွဲ ကလေးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူကြားတာတွေကို သူ့အသံထွက်နဲ့ သူ လိုက်ပြောစ, ပြုတဲ့အရွယ်ပေါ့၊ အဖေနဲ့ အမေက ဘာသာစကား တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ သူ့ကိုပြော တော့ သူလိုက်ပြောနိုင်တာလည်းရှိ မပြောနိုင်တာလည်းရှိပေါ့လေ၊ တချို့စကားလုံးတွေကို သူက မြန်မာလို ပြောတယ်၊ တချို့ဟာတွေကိုတော့ ပြင်သစ်လို ပိုမှတ်မိနေတယ်၊ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဆော်န်းတေး ဆိုတာသူမှတ်မိနေတဲ့ ပြင်သစ် အိတ်က်စပရက်ရှင် တစ်ခုပါပဲ၊
သားကလေး မပီကလာ ပြော, ပြောနေတဲ့ အဲဒီဆော်န်းတေးက A votre santé (to your health) ကနေ လာတာပါ၊ Drink တစ်ခုခု သောက်ခါနီးမှာ ပြောနေကျ အင်္ဂလိပ်စကား cheers နဲ့အတူတူပါ ပဲ၊ အဲဒီလို တစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တစ်ယောက်က ဆုတောင်းပေးတဲ့ ဓလေ့ကိုစဉ်းစားရင်း ကျနော်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံက ရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တွေကိုတွေးမိသွား တယ်၊ ရှေးခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ကျနော်လေ့လာ ရေးရောက်တော့ အဲဒီကျောင်းတွေရဲ့ အရေးပါခဲ့တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုလည်း သိရတယ်၊ တခြား တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘီယာချက်လုပ်တဲ့ အကြောင်းပါ၊ သိကြတဲ့ အတိုင်း ဘယ်လ်ဂျီယံက ဘီယာ အမျိုးအစားစုံတဲ့အထဲမှာ နာမည်ကြီးဆိုတော့ အာရ်စီကျောင်းတွေမှာလည်း ဒီအတတ်ရှိနေခဲ့တာ သိပ်တော့မဆန်းဘူးလို့ ပြောရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေကတော့ တကယ့်ကိုလိုအပ်ခဲ့လို့ ဘီယာချက်ခဲ့ရတာပါ၊
ကျနော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်း ၁၂ ရာစု၊ ၁၃ ရာစုဝန်းကျင်တွေမှာ ဥရောပဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ ရာသီဥတု၊ ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါဘယတွေနဲ့ တင်းကြမ်းပြည့်နေချိန်ပေါ့၊ စစ်မက်တွေထူပြော၊ ပုလိပ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ အစရှိတဲ့ ရောဂါကြီးတွေဖြစ်ပွား၊ တုန်ခိုက်အောင်အေးစက် နေတဲ့ ဆောင်းတွင်းရှည်ကြီးတွေနဲ့ လူတွေကသက်ဆိုးမရှည်ကြဘူး၊ ဒါတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အံတုဖို့အတွက် ဘီယာတွေကို ဆေးဝါးအဖြစ် စတင်ချက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီဘီယာတွေက အခု ခေတ် ကျနော်တို့သောက်နေတဲ့ အရသာမျိုးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ၊ ခါးသက်သက်နဲ့ ပြန်အန်မ ထွက်အောင် ကျိတ်မှိတ်မျိုချရတဲ့ အထဲမှာပါတယ်၊ သောက်ခါနီးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကျန်းမာပါစေကြောင်း A votre santé ဆိုပြီး ဆုတောင်းကြတယ်၊ အဲဒီလို ဆေးဝါးမှီဝဲနိုင်တဲ့လူတွေ အဖို့တော့ သူများထက်ပိုကျန်းမာလို့ အသက် ၄၂ နှစ်ဝန်းကျင်ထိ နေခွင့်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘုန်း ကြီးကျောင်းတွေက အနည်းစုဖြစ်တော့ကာ သူတို့နဲအလှမ်းဝေးတဲ့ လူတွေခမျာတော့ ဘီယာ သောက်ခွင့်မရဘဲ သက်ဆိုးမရှည်ကြရှာဘူး၊ အဲဒီကာလက ပျမ်းမျှလူ့သက်တမ်းက ၂၄ နှစ်ပါ၊
အဲဒီလိုရှေးဟောင်းအာရ်စီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆုတောင်းပေးရင်းသောက်ခဲ့ကြတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ ကဒီနေ့အထိ ဝိုင်တို့၊ ဘီယာတို့ သောက်ရင် santé လုပ်ကြပါတယ်၊ မူလတုန်းကတော့ ဆေးဝါး အနေနဲ့သောက်တဲ့ အရက်၊ ဝိုင်၊ ဘီယာ အစရှိတဲ့ alcoholic drink တစ်ခုခုမှာ ပြောလေ့ရှိခဲ့ကြပေ မယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဘယ်လို drink ပဲဖြစ်ဖြစ် ထုံးစံအနေနဲ့ ပြောကြပါတယ်၊ တစ်ခုရှိတာက ဘယ်ဟာအတွက်ပဲပြောပြော ကိုယ်နဲ့ ခွက်ချင်းထိတဲ့လူကို မျက်လုံးထဲ တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောဖို့ လိုပါတယ်၊ ဒီအပြုအမူဟာ အခုခေတ်မှာတော့ အရေးတယူရှိမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာထက် မပိုတော့ ပေမယ့် ခေတ်ဟောင်းကာလတွေ တုန်းကတော့ သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးခဲ့တယ်၊
အဲဒီကာလတွေမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လုပ်ကြံဖို့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံးနည်းက ဝိုင်ခွက်ထဲ အဆိပ်ခတ်တဲ့ နည်းပါပဲ၊ မသောက်ခင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံရဲဖြစ်နေတဲ့ သံသယမြူ တွေကင်းအောင်၊ တစ်ဦးခွက်ထဲမှာ တစ်ဦးအဆိပ်မခတ်ဘဲ လိပ်ပြာသန့်တယ်ဆိုတာ ပြရအောင် မျက်လုံးထဲ ကြည့်ပြီးမှ ဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်၊ ပြီးတော့မှ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်တာကို ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ cheers ၊ ဒါမှမဟုတ် to your health (à votre santé) ပေါ့၊ အဲဒီ အခါမှာလည်း ဝိုင်ခွက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း တိုက်လေ့ရှိကြတယ်၊ ဝိုင်ကို ခွက်ထဲမှာ အပြည့်ထည့်လေ့ရှိ တော့ အဲဒီလိုတိုက်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်ဆီကဝိုင်က နောက်တစ်ယောက်ခွက်ထဲကို ဖိတ်စင် သွားအောင်လို့ပါပဲ၊ ဘယ်သူ့ခွက်ထဲမှာမှ အဆိပ်မပါဘူးဆိုတာ ထပ်လောင်းပြသတာပါပဲ၊
တခါမှာတော့ အခုလို အရက်မသောက်ခင် ဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောကြရင်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က cheers လိုမျိုးစကားတွေ ဘာသာစကားတော်တော်များများမှာ ရှိတဲ့ အကြောင်း၊ မြန်မာမှာတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိကြောင်း ပြောတယ်၊ သူ့စကားလည်းဆုံးရော နဲနဲမှန်နေတဲ့ တစ်ယောက်က ပြန်ပြောလိုက်တယ်၊ ‘ကျန်းမာပျော်ရွှင်၊ စော်ကြည်အကြွေးကျေ၊ တော်တော်နဲ့မ သေ’ တဲ့၊ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ်၊ ‘ငါတို့ဟာကမှ အပြည့်စုံဆုံးကွ’ တဲ့၊ အင်း-တတ်နိုင် ရင်နောက်ဘဝတွေ အတွက်ပါ တခါတည်း ထည့်ဆုတောင်းမယ့်ပုံပဲ၊
ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းတစ်ကွက်ကိုလည်း သတိရမိပါတယ်၊ အတော်လေး ပိန်လှီနေတဲ့ အမူးသမား တစ်ယောက်က အရက်ခွက်လေးကိုင်ထားရင်း ‘အင်း..သူများတွေ ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်၊ သောက်လိုက်လုပ်ရင်း အခုလို ကျန်းမာရေး ဆိုးလာတာပါပဲဗျာ’ တဲ့၊ လူကြီး တွေပြောပြောနေတဲ့ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် မှီဝဲတယ်ဆိုတာ တကယ်မှန်ပါတယ်၊ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆို တာ မမေ့သင့်ပါဘူး၊ အရက်ဟာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောရင် နေ့တိုင်းဝိုင်တစ်ခွက် မှန်မှန်သောက်ပြီး အသက်ကိုးဆယ်၊ တစ်ရာဝန်းကျင် ရှိကြတဲ့ အီတလီတောင်ပိုင်းက လယ်သမားကြီးတွေ၊ ဂျပန်ပြည် ကျွန်းစုလေးတွေပေါ်က အဖိုးအဖွားတွေက ပြုံးကြပါလိမ့်မယ်၊ ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ရေတောင်မှ အလွန်အကျွံသောက်ရင် သေနိုင်ပါတယ်၊ တကယ်တမ်း အန္တရာယ်ရှိတာက မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လူ့ စိတ်ပါပဲ၊ သားကလေးကတော့ ထမင်းစားတိုင်း သူ့ရေဘူးလေး မြှောက်မြှောက်ပြီး ဆော်န်းတေးတဲ့။
၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Posted by ညီလင်းသစ် au 23.2.096comments
Canon EOS450d, Sigma 18-200, 78mm, f/5.6, 1/60, ISO200, built-in flash
Silent Music (2)
Canon EOS450d, Sigma 18-200, 200mm, f/6.3, 1/60, ISO200, built-in flash
Silent Music (3)
Canon EOS450d, Sigma 18-200, 63mm, f/5.0, 1/60, ISO200, built-in flash
Silent Music (4)
Canon EOS450d, Sigma 18-200, 173mm, f/6.3, 1/60, ISO200, built-in flash
Silent Music (5)
Canon EOS450d, Sigma 18-200, 96mm, f/5.6, 1/60, ISO200, built-in flash
Silent Music (6)
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.2.09 1 comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 17.2.09 8 comments
မင်းလည်း ငါ့နေရာ ရောက်လိမ့်မပေါ့။
၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Posted by ညီလင်းသစ် au 16.2.093comments
Canon 450d, 89mm, f/4.5, 1/60, ISO800
Posted by ညီလင်းသစ် au 15.2.096comments
ဆေးတွေ ခမ်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်... ...၊
အေဒီ ၃ ရာစုအတွက်
ရှိုက်ငင် မှိန်ဖျော့သွားချိန်အထိပေါ့ ။ ။
Posted by ညီလင်းသစ် au 13.2.093comments
အလည်အပတ်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်နီ ကမ်းနဖူးပေါ်က မြို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအပိုင်း ၂ က တော့ ပုံပြပို့စ် သက်သက် ပဲဖြစ်လို့ ခရီးစဉ်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို သိလိုရင်တော့ အပိုင်း ၁ မှာ ဖတ်နိုင်ပါ တယ်၊ မံမီ တဦးတလေနဲ့မှ မဆုံဖြစ်လိုက်ဘဲ ကျနော် ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ခရီးပေါ့...။ ။
ဂျစ်ပဆီမိုးတိမ် တချို့ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ နှုတ်ဆက် ထားရစ်ခဲ့လိုက်တယ်
စွန်ပလွံပင်များကြားမှ Sharm El-Sheikh ကမ်းခြေ
Sharm El-Sheikh by night...
အာရပ်အခေါ် Karkade (ခါရ်ကာဒေး) ဆိုတဲ့ Hibiscus ပန်း..၊ ဒီပန်းဖျော်ရည်ကိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်သောက်ချင်သေးတယ်၊
ဒီခေါင်ရန်းပန်းတွေက ကျနော်သတိထားမိသလောက် မနက်နေရောင်ကောင်းကောင်း ရလာမှ ပိုပွင့်လာကြတယ်၊ နေပူဆာလှုံဖို့ ပြင်ဆင် ပွင့်အာလာနေတဲ့ ခေါင်ရန်းတစ်ပွင့်ကို ကျနော်က ကင်မရာမှန်ဘီလူးကနေ ခံစားလိုက်တယ်၊
ပင်လယ်နီက ဆားပျော်ဝင်နှုန်း သိပ်သည်းဆ density မြင့်တဲ့ ပင်လယ်တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်၊ သားကလေးက အဲဒီဆား ငန်ရည်တွေကို ကျနော်တို့အလစ်မှာ ခိုး,ခိုးသောက်ပြီး သဘောတွေ ကျနေလေရဲ့၊
စွန်ပလွံတစ်ပင်၏ ကွမ်းတကမ်းအလှ...၊ စွန်ပလွံသီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ရပေမယ့် ကျနော်က အခြောက်ပဲ ကြိုက်တယ်၊ အဲ... စွန် ပလွံသီးအခြောက်ပဲ ပိုကြိုက်တယ်လို့ ပြောတာ :D
လေယာဉ်ကွင်းနဲ့ ၁၀ မိနစ်စာ ကားမောင်းရတဲ့ အကွာအဝေးမို့ ပြေးလမ်းအတွက် ချဉ်းကပ်တဲ့လေယာဉ်တွေက ခပ်နိမ့်နိမ့်ကနေ ပျံသွား ကြတယ်၊ တစ်ရက်ကို အစီး ၂၀ လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်၊
မအိမ်သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ကြားထဲက အခက်အခဲကို ရှင်းပေးလိုက်တဲ့ သင်္ဘော...၊ ဧည့်သည်ပါးချိန်မို့ တစ်ရက်ကို ၃ ခေါက်ပဲထွက်ပြီး တစ်ခါ ထွက်ရင် တစ်နာရီ ဝန်းကျင်ခန့် ကြာပါတယ်၊
သင်္ဘောအတွင်းပိုင်းမှာ ရေအောက်ရှုခင်းကို ကြည့်ဖို့အတွက် အခုလို မှန်နဲ့ခင်းထားတယ်၊ ရေကလည်း ကြည်တဲ့အတွက် တော်တော်ကို ကွဲကွဲပြားပြား မြင်ရပါတယ်၊
ကျနော် အမျိုးအမည် မသိခဲ့သော ငါးမောင်နှံ၊ (ကျနော်ယူခဲ့တဲ့ သတ္တဗေဒဘွဲ့ကို အားနာတာနဲ့ ကိုယ်တစ်ဝက်ဖော့ပြီး ထိုင်နေလိုက်တယ်)
တချို့သန္တာကျောက်တန်းတွေက အတော်လှတယ်၊ သင်္ဘောသားတွေက ဒီရေအောက်ရှုခင်းတွေကို အလွတ်ရနေတော့ ကျောက်တန်း တွေပေါ်ကနေ မောင်းပေးတယ်၊ ရေအောက်မီတာ ၃၀ (ပေ ၉၀ခန့်) အထိ ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်၊
လာပြန်ပြီ နောက်တစ်ကောင်...၊ (အခုတော့ ကိုယ်ဖော့ရုံနဲ့ မလုံလောက်လို့ ကျနော်မတ်တပ်ပဲ ရပ်နေလိုက်တော့တယ်) :D
Sharm El-Sheikh ရဲ့အဝေးမြင်ကွင်း၊ ဟိုး အနောက်က တောင်တန်းတွေက ဆိုင်းနိုင်း (Sinai) လို့လည်း ခေါ်ကြတဲ့ သိနတောင်တန်း တွေပေါ့၊ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာလာ ပညတ်တော် ၁၀ ပါးကို မောရှေ (Moses) ရေးခဲ့တဲ့ နေရာ...၊
အပြန်ခရီး...၊ လေယာဉ်အမြီးက အနီတန်းလေး စတဲ့နေရာဟာ Sharm El-Sheikh ရဲ့တည်နေရာပါပဲ၊
Good bye Red sea...! ပုံရဲ့ အပေါ်ဖက်နားမှာ စူးအက်တူးမြောင်းရဲ့ အဆက် မြစ်လက်တက်ကို ခပ်ဝါးဝါး တွေ့နိုင်ပါတယ်၊ အီဂျစ်ကတော့ နေရာ တော်တော်များများမှာ အခုလို သဲကန္တာရတွေပဲ ရှိလေရဲ့...။
Posted by ညီလင်းသစ် au 11.2.095comments
ဇန်နဝါရီလရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာ ကျနော်တို့မိသားစု Sharm El-Sheikh (ရှားမဲလ်ရှိတ်ခ်) ကို သွားလည်ဖြစ်တယ်၊ ဒီမြို့ကလေးက အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ပင်လယ်နီ (Red sea) ရဲ့ကမ်းနဖူးမှာ ရှိပါတယ်၊ စူးအက်တူးမြောင်း (Suez Canal) ရဲ့အောက်ဖက်ကို နဲနဲဆင်းလာရင် ညာဖက်မှာ ရှိတယ်၊ ဒီခရီး စဉ်ဟာ သားကလေးမွေးပြီးမှ သွားတဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်စီး ခရီးလည်းဖြစ်တယ်၊ သူ့အတွက် ပထမဆုံး ပင်လယ်ခရီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊
အိမ်ကနေ ဂျနီဗာ (Geneva) မြို့ကို ကားနဲ့ နာရီဝက်၊ ဂျနီဗာကနေ Sharm ကို လေယာဉ်နဲ့ ၃ နာရီ သွားရတယ်၊ လေယာဉ်ခရီး ၃ နာရီဆိုတာ လူကြီးတွေအတွက်တော့ ဘာမှမကြာပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သားအတွက်ကတော့ ၃ ကမ္ဘာလောက် ကြာတယ်လို့ ခံစားရမယ် ထင်တယ်၊ သူ တော်တော် စိတ် ညစ်သွားတယ်၊ သားက အင်မတန် လှုပ်ရှား၊ လေ့လာ၊ သင်ကြားဖို့ ဘယ်တော့မှ အငြိမ်မနေတဲ့ ကလေးစာရင်းထဲမှာပါတယ်၊ လေယာဉ်ထဲကလူသွားလမ်းမှာ တစ်ခါလွှတ်ပေးလိုက်တာ လေယာဉ် မှူးအခန်းနားထိ ပြေးသွားလို့ မနည်းလိုက်ဖမ်းရတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ကို လွှတ်မပေးရဲတော့ဘူး၊ ဒီတော့ ဆရာလေးက စိတ်တိုပြီး တဂျီဂျီဖြစ်လာရော...၊ အဲဒါလေးကလွဲရင် လေယာဉ်ခရီးကအ သွားရော အပြန်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်၊
ဟိုရောက်တော့ ညနေနဲနဲ စောင်းသွားတာနဲ့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှ သူ့ကိုပင်လယ်ဆီ ခေါ်သွား လိုက်တယ်၊ ပင်လယ်နီနဲ့ သားကလေးရဲ့ တွေ့ဆုံခန်းပေါ့၊ သူ့ရဲ့ ဆရာဝန်က ပြောလိုက်တယ်၊ ကလေးက ပင်လယ်လှိုင်းလုံးတွေကို နဲနဲ ကြောက်ကောင်း ကြောက်နိုင်တယ်-တဲ့၊ ဘယ်...ကြောက် ဖို့နေနေသာသာ လက်ထဲက အတင်းတွန်းထိုး ရုန်းကန်ပြီး ပင်လယ်ထဲ ပြေးဆင်းသွားလို့ လိုက်ဖမ်း ရပြန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီညနေမှာပဲ သားကလေး ဖျားပြီး ကိုယ်အပူချိန်တွေ တက်လာတယ်၊ အဖျားက ၃၉°C အထိ ဖြစ်လာတာနဲ့ ပါလာတဲ့ Ibuprofen တိုက်လိုက်တယ်၊ နောက်တစ်နေ့မှာ သက်သာပေမယ့် သေချာအောင် ဆရာဝန်သွားပြတော့ အာသီးရောင်တာ ဖြစ်နေတယ်၊ အပူချိန် အပြောင်းအလဲ ကြောင့်ဖြစ်တာပါ-တဲ့၊ ဟုတ်မယ်၊ ကျနော်တို့ ထွက်လာတော့ ဟိုမှာ - ၂ °C ၊ ဒီမှာ က ၂၄ °C ဆိုတော့ အပြောင်းအလဲက နဲနဲမြန်တယ်၊ Antibiotic စ,တိုက်လိုက်တော့ တဖြည်းဖြည်း သက်သာသွားပါတယ်၊
Sharm El-Sheikh ကပြောရရင်တော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေစခန်း တစ်ခုပါပဲ၊ ၁၉၈၅ အထိ ကတံငါရွာကလေး အဖြစ်နဲ့ပဲ ရှိသေးတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှ Tourist destination အဖြစ်အရမ်းစည် ကားလာခဲ့တယ်၊ စည်ကားရတဲ့ အကြောင်းက သူ့ရဲ့ Aquatic life ကြောင့်ပဲ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ Sharm ရဲ့တဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ ပင်လယ်နီထဲမှာ အင်မတန်လှတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေနဲ့ ရောင်စုံငါးမျိုးစုံရှိ တယ်၊ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က snorkelling နဲ့ diving သမားတွေ မဖြစ်မနေ လာရတဲ့နေရာ တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်၊ ကျနော့်မှာ ပါသွားတဲ့ အပျော်တမ်းသုံး snorkel လေးနဲ့ ငုပ်ကြည့်တော့ ထူး ဆန်းတဲ့ ငါးတွေ တွေ့ရတယ်၊ ဝေးဝေးသွားစရာ မလိုပါဘူး၊ ကမ်းစပ်ကနေ သုံးလေးမီတာ အကွာမှာ တင်ပဲ ငါးတွေအများကြီး ရှိနေပြီ၊ ငါးအဝါ၊ ငါးအစိမ်း၊ ငါးအနီ၊ ငါးအပြာ... အတော့်ကိုစုံတယ်၊ ဒီငါး တွေနဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေကို ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WWF) ကကာကွယ် ထားတယ်၊
အဲဒီမှာ ရေအောက်ကို ကြည့်ဖို့အတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားတဲ့ သင်္ဘောတွေ ရှိတယ်၊ အဲဒီ သင်္ဘောတွေမှာ ရေအောက်ခန်းတစ်ထပ်ပါတယ်၊ အဲဒီသင်္ဘောအောက်က တစ်ခန်းလုံးကရေ အောက်ထဲမှာ ရှိပြီးတော့ ဘေးပတ်လည်က မှန်တွေကနေ aquatic life ကိုကြည့်ဖို့လုပ်ထားတယ်၊ ဒါကိုမြင်တော့ ကျနော်က အဲဒီသင်္ဘောကို စီးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မအိမ်သူက မစီးရဲဘူး၊ သူက နဲနဲ claustrophobic ဖြစ်တယ်၊ မှောင်ပိတ်နေတဲ့အခန်း၊ ဓါတ်လှေခါးလို ကျဉ်းကျပ်တဲ့အခန်း၊ မွန်းကျပ် ပိတ်ဆို့တဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ကြောက်တဲ့ စိတ်အခံပေါ့လေ၊ တစ်ယောက်ထဲ သွားစီးပါ-တဲ့၊ ဒီလိုတော့ လည်းကျနော်က မစီးချင်ပြန်ဘူး၊ အဲဒီလိုနဲ့ ရှိနေတုန်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ့်နည်းကို သွား တွေ့တယ်၊ အဲဒါက မှန်ကြမ်းပြင်နဲ့ သင်္ဘောပဲ၊ အဲဒီ သင်္ဘောကလည်း စောစောကဟာတွေလိုပဲ ရေ အောက်ကြည့်ဖို့အတွက်၊ ဒါပေမယ့် သူက ရိုးရိုးသင်္ဘောမှာ မှန်ကြမ်းပြင်တပ်ထားရုံ သက်သက်ပဲဆို တော့ ကျဉ်းကျပ်တာမျိုး မခံစားရတော့ဘူး ပေါ့လေ၊ အဲဒါကိုပဲ စီးဖြစ်သွားတယ်၊ တကယ်တော့ ကျနော်က အီဂျစ်အထိလာပြီး ငါးတွေကြည့်မယ့်အစား ပစ်ရမစ်တွေ၊ ဖာရောဘုရင်တွေကို ပိုပြီး ကြည့်ချင်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နဲ့အတူပါတဲ့ ၁ နှစ်နဲ့ ၅ လအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က ဒါတွေကို ဘယ်စိတ်ဝင်စားမှာလဲ၊ နေပူပူ ဖုန်ထူထူမှာ သူ့အတွက် စိတ်ညစ်စရာတွေ ချည်းဖြစ်နေ မှာ အသေအချာပေါ့၊ ဒီတော့လည်း လောလောဆယ်တော့ ရသေ့စိတ်ဖြေပေါ့လေ၊ See you later Kings Pharaoh...!
Sharm El-Sheikh မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တိုင်းမှာ လုံခြုံရေးတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားသလို လမ်း တွေပေါ်မှာလည်း ရဲတွေ နေရာတကာမှာ ရှိတယ်၊ သူတို့မှာ terrorist attack အတွက် အမြဲအသင့် ပြင်ထားရတယ်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ဒီမှာ ၇ နေရာဆက်တိုက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ချိန်ကိုက်ဗုံး တွေနဲ့ အသေခံ ဗုံးခွဲသမားတစ်ယောက်...၊ ဒီလူက tourist တွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဟိုတယ် တစ်ခုထဲကို ကားနဲ့တရကြမ်း မောင်းဝင်လာခဲ့တယ်၊ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းတွေ အပြည့် တင်ထားတဲ့ကားက အပြင်းထန်ဆုံး မြည်ဟည်းပေါက်ကွဲသွားတယ်၊ လူတွေအများကြီး သေကြေခဲ့ ကြတယ်၊ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာချက် ထုတ်တယ်၊ ဒီလို ခြိမ်းခြောက် မှုတွေက အမြဲရှိနေတော့ လုံခြုံရေးဟာ သူတို့အတွက် နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်၊
Sharm El-Sheikh ကိုလာကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ အများဆုံးက ရုရှားလူမျိုးတွေပါ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လာကြတယ်၊ ကျနော်တို့ သွားတဲ့အချိန်က ဧည့်သည်ရာသီ မဟုတ်တာတောင် နေရာတိုင်းလိုလို တွေ့ရတယ်၊ ဘယ်လောက်လာသလဲဆို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ menu ကဒ်ကို ရုရှန်ဘာသာနဲ့ သီးခြားထားပေးရတဲ့ အထိပါပဲ၊ ဒုတိယ အလာဆုံးက အီတာလျန် လူမျိုးတွေပါ၊ သူတို့လည်း တော် တော်များကြတယ်၊ အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ကိုင်ရိုမြို့တော်က လာကြတဲ့ အီဂျစ် လူမျိုးတွေပါ၊ အာရပ်စကား ပြောကြတယ်၊ ထူးခြားတာက ဝန်ထမ်းအားလုံးက ယောက်ျားတွေ ချည်းပဲ၊ မိန်းမတွေက အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ၊ ကလေးတွေနဲ့ နေခဲ့ကြတယ်၊ ဧည့်ကြိုက အစ, အခန်းသန့်ရှင်းရေးအထိ ယောက်ျားတွေပဲ လုပ်ကြတယ်၊ ရုရှန်နဲ့ အီတာလျန်တွေကြောင့် သူတို့တော်တော်များများ အဲဒီစကားတွေကို ပြောတတ်ကြတယ်၊ ပြင်သစ်စကား တတ်တဲ့သူတော့ တော်တော်ရှားတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားလည်း အတန်အသင့်ပါပဲ၊
မြန်မာပြည်က ထွက်ကတည်းက မတွေ့ရတော့တဲ့ စက္ကူပန်းကို အဲဒီမှာမှ ပြန်တွေ့ရတယ်၊ ခေါင်ရန်း ပန်းတွေလည်း အများကြီးပဲ၊ အီဂျစ်က ဒေသစာထဲမှာ ခေါင်ရန်းပန်း ဖျော်ရည်လည်း ပါတယ်၊ တော် တော်လေး သောက်လို့ကောင်းတယ်၊ ခေါင်ရန်းပန်းကို အခြောက်လှန်း၊ အဲဒီပန်းခြောက်ကို ရေနွေး ဆူဆူနဲ့ လက်ဖက်ခြောက်နှပ်သလိုနှပ်ထား၊ သကြားထည့်၊ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အေးနေအောင်ထား ပြီးသောက်ရုံပါပဲ၊ သွေးတိုးအတွက် ကောင်းတယ်လို့လည်း ပြောကြတာပဲ၊ ဒေသအခေါ်ကတော့ အာရပ်ဘာသာနဲ့ Karkade လို့ခေါ်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်ဒေသစာ တစ်ခုက Balilah လို့ခေါ်တဲ့ corn flakes လိုဟာမျိုး၊ ဆန်ပေါက်ပေါက်တွေကို ပျားရည်၊ နို့၊ သကြား စတာတွေနဲ့ စားရတဲ့ အချိုစာပါ၊ သိပ်တော့ မဆန်းပါဘူး၊ ကျနော်ကြိုက်တာကတော့ Foul လို့ခေါ်တဲ့ ပဲကြီးဟင်း၊ အရည်နဲ့ ခပ်ပျစ် ပျစ်ပြုတ်ထားတဲ့ ပဲကြီးကို မဆလာ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဆား၊ စတာတွေထည့်ပြီး သံပုရာရည်နဲ့ ညှစ်စား ရတယ်၊ ဗယာကြော်သုပ် အရသာနဲ့ အတော်ဆင်တယ်၊ တခုတ်တရ ဖွဲ့နွဲ့ရလောက်အောင် မကောင်းပေမယ့် အချဉ်အစပ်ကြိုက်တဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ အတော်ပါပဲ၊ ပင်လယ်နီရဲ့ ကမ်းစပ် မှာ အီဂျစ်ရိုးရာ Foul ပဲကြီးဟင်းကို တစိမ့်စိမ့်စားရင်း ပန်းဆိုးတန်းလမ်းပေါ်က ဗယာကြော်သုပ် တွေကို ကျနော်သတိရနေခဲ့တယ်။ ။
(ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ အပိုင်း ၂ မှာ တင်ပေးပါ့မယ်)
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.2.092comments
Labels: Souvenirs, Voyage
Posted by ညီလင်းသစ် au 5.2.092comments